Izixhobo zokuhamba: bhukisha iihotele, khangela iinqwelomoya, iimoto eziqeshisayo, ...
Ezi uceba uhambo kwaye ufuna uncedo? Ke le webhusayithi yile nto uyifunayo. Vula lwekiso sinalo lonke ulwazi oluphambili malunga neyona ndawo iphambili yabakhenkethi kwihlabathi. Yonke imihla sipapasha amanqaku kunye iingcebiso zokuhamba, iindawo ongenakuphulukana nazo, iilwandle ezintle, eyona nto intle kakhulu, eyona gastronomy kunye nokunye okuninzi.
Ngaba sinokukunceda kuhambo lwakho?
Kananjalo ukuba ulungiselela uhambo olukhuselekileyo olo ufuna uncedo ukubhukisha iihotele, fumana iinqwelomoya, qesha imoto eqeshisayo, ... kwaye konke oku ngexabiso elifanelekileyo kunye nazo zonke iziqinisekiso zentengiso. Ungathini ukuba? Ewe, apha sinokukunceda nathi. Sebenzisa ezi injini zokukhangela zilandelayo ukufumana elona xabiso libiza kancinane kwaye ukhathazeke kuphela ngokonwabela iiholide zakho.
Apha uya kufumana eyona ntengiso ibhetele. Fumana kwaye ubhukishe ihotele yakho kwiimeko ezifanelekileyo, kwimizuzu embalwa kunye nazo zonke iziqinisekiso.
Enye yamanqaku aphambili kukufumana ihotele apho sinokuhlala khona kwaye siphumle ngeentsuku zeholide. Kule nto, akukho nto njengokukhetha eyona ilungileyo iihotele ezingabizi kakhulu ezifumaneka kwihlabathi liphela. Nangona ucinga ukuba inokuba ngumsebenzi onzima, ayizukuba nzima injini yokukhangela ehotele. Ngale ndlela, kufuneka sicinge ngendawo apho sifuna ukulahleka khona iintsuku ezimbalwa.
Nje ukuba siyicacise, siyibhala kwindawo yokukhangela. Emva kwakhe, konke okuseleyo kukuthatha isigqibo ngomhla nangenyanga esiza kuyichitha ngokuzonwabisa. Ukwenza oku, unokubona ukuba ikhalenda iboniswa njani. Ngale ndlela, kuya kuba lula ngakumbi ukukhetha iintsuku. Okokugqibela, uya kuba nenketho yokukhetha inani labantu.
Nje ukuba bazaliswe, baya kuvela Unikezelo kunye nokunyuselwa yeehotele kwindawo ekhethiweyo. Ukongeza, unokukhetha ukhetho olunomtsalane njengazo zonke iihotele ezibandakanya konke okanye ezo zikunika isidlo sakusasa kuphela. Ngoku kufuneka ujonge ukuba kukuthanda kwakho na kwaye ukhethe phakathi kwezi ndlela zahlukeneyo. Ngokuqinisekileyo bonke baya kuthanda!
Hamba apho uhambela khona inqwelomoya yakho ngexabiso elihle. Sebenzisa i-injini yethu yokukhangela kwaye ufumane ukubhabha kwakho ngesiqinisekiso esipheleleyo kwaye kubiza kakhulu.
Khangela iinqwelomoya ngeRumbo
Khangela iinqwelomoya ngeDreams
Khangela iinqwelomoya nge Skyscanner
Khangela iinqwelomoya ngeAtrapalo
Khangela iinqwelomoya ngeLiligo
Khangela iinqwelomoya ngeMizuzu yokugqibela
Ukuba sele siyikhethile indawo esiza kuyityelela, nkqu nehotele esinokuhlala kuyo, kufuneka sijonge ukufumaneka kweenqwelo-moya. Awudingi nayiphi na ingxaki engaphezulu kunale sikuxelele yona. Kwiphepha elifanayo, unokufumana injini yokukhangela ngeenqwelo eziphantsi. Isixhobo esinayo yonke into yokukhetha izibonelelo ezilungileyo kwaye sizenze zifumaneke kuwe.
Baninzi abantu abacinga ukuba kwindiza siphulukana nenxalenye enkulu yohlahlo-lwabiwo mali. Kuba asinabo bonke uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu lweholide, kuya kufuneka sicofe kancinci. Ewe kunjalo, enkosi kwiinjini yokukhangela elungileyo, unokukhetha izivumelwano zokubhabha. Amaxabiso aphezulu kunye neenkampani ezinikezela ngazo ziya kuvela. Ngendlela efanayo, imvelaphi iya kuboniswa, kunye nendawo ekuyiwa kuyo kunye neeyure zexesha elifanayo. Ke, ukuba inesikali, iya kuboniswa ngokucacileyo. Nje ukuba ugcwalise kumabala aceliweyo kwiinjini yokukhangela, uya kuba nazo zonke iziqinisekiso kunye nesiphumo kumaxabiso amangalisayo.
Khangela imoto eqeshisayo ehambelana neemfuno zakho kwisixeko oya kuso. Sinesona sinikezelo sikhulu se iimoto eziqeshisayo Ukusuka kwihlabathi liphela nangamaxabiso aphezulu.
Ukuba awufuni ukuthatha imoto yakho, kodwa emva koko ufuna ukuya kwindawo oya kuyo ngentuthuzelo iyonke, unokukhetha neemoto eziqeshisayo. Ke akufuneki ubuze buqu kwaye ulungile xa ufika emhlabeni, ungalibali injini yokukhangela imoto.
Kuyo unokufikelela ngokufanelekileyo kuzo zonke iinkampani ezinkulu. Ukongeza, xa ubhukisha kwi-Intanethi, unokufumana izaphulelo ezinkulu. Into engakhe ibuhlungu. Ewe enye inzuzo yokubhukisha imoto eqeshisayo kukuba uyakwazi ukulawula ukubhukisha kwakho. Oku kukuba unokuguqula okanye ukurhoxisa.
Iingcebiso xa uqasha imoto
Ukongeza ekubeni linyathelo elilula kakhulu, ngenjini yokukhangela, kuya kufuneka uyazi loo nto imoto nganye inexabiso. Oku kuyakuchazwa ngokupheleleyo kwiphepha ngalinye oya kuba nakho ukufikelela kulo. Iya kuhlala ixhomekeka kuhlobo lwemoto kwaye ngamanye amaxesha nakwindawo esiqesha kuyo. Kungenxa yoko le nto iRenault Clío okanye iCitroen C1 okanye iC4 zezinye zeendlela ezingabizi kakhulu. Ewe kunjalo, njengoko sikuxelela, kuya kufuneka ujonge kwiwebhusayithi nganye kwaye ufunde iimeko kakuhle.
Bhukisha nanini na apho unakho ngaphambili. Siyazi kakuhle ukuba imihla ephezulu yexesha isoloko isenza amaxabiso abize kakhulu. Ezinye iinkampani zifuna ukuba umqhubi angabi ngaphantsi kweminyaka engama-25 ubudala, kodwa ezinye iintlawulo zingongezwa. Khumbula ukuba uhlala ushiya itanki yegesi njengoko siyifumene. Kungenxa yoko le nto, apho kunokwenzeka, siya kukhetha umgaqo-nkqubo osekwe kwitanki epheleleyo / epheleleyo. Ngale ndlela siyakuphepha ukumangaliswa kwaye siya kuba nakho ukugcwalisa ipetroli apho ilungele khona, ukuba nje siyishiya igcwele.
Thatha i-inshurensi yokuhamba
Ukuba uza kuthatha uhambo lwaphesheya kwaye ufuna ukunqanda naluphi na uhlobo lweengxaki, umbono olungileyo kukuthatha i-inshurensi yokuhamba. Umboneleli wethu nge-inshurensi ye-IATI inikeza uluhlu olubanzi kakhulu lwe-inshurensi yokuhamba ukuze ihambelane neemfuno zakho. Ukongeza, ukwenza isivumelwano seinshurensi yakho kwiwebhusayithi yethu uyakonwabela isaphulelo se5% ngokubhekisele kwiirhafu eziqhelekileyo.
Inkqubo yesivumelwano seinshurensi ilula kakhulu, kuya kufuneka:
Ngena iwebhusayithi yeinshurensi ngokunqakraza apha.
Chaza indawo ohlala kuyo, indawo oya kuyo nohambo kunye nemihla
Cofa kwiqhosha «Bala uhlahlo-lwabiwo mali» kwaye ugqibile
Okwangoku isixhobo sikunika ikhathalogu yonke yeemveliso esele ikho kwiihambo zakho ngamaxabiso asezantsi. Khetha eyona ilungele iimfuno zakho kwaye ugcwalise iinkcukacha zakho ukuze uyiqeshe kwaye sele UKUFUMANA INSHORENSI YAKHO.
Cofa apha ukubhukisha i-inshurensi yakho yokuhamba ngesaphulelo esiyi-5%
Iindawo ekuhlala kuzo iindwendwe ezininzi ngonyaka
Enye yezona ndawo zidumileyo kubakhenkethi yiFrance. Kungenxa indawo yokuqala, ngophando olupapashiweyo. Kuyo kuthiwa ngabantu abamalunga nezigidi ezingama-85 abakhethe le ndawo kwaye ke, kufuneka kuthiwe ayisiyonto incinci. Zininzi izinto ezinomtsalane eFrance. Abakhenkethi bakhetha i-Eiffel Tower njengenye yeendawo ekumelwe zibonwa. Abanye banobuganga bokuyinyuka, ngelixa abanye becinga ngayo ngaphandle ngakumbi ukutshona kwelanga.
Ngaphandle kwemigca emide, iLouvre ikwayimfuneko. Into ekufuneka siyithethile malunga ne-Notre Dame Cathedral. Kananjalo akufuneki ulibale ukutyelela enye yezona ndawo zithandwayo, nangona kule ndawo nganye kwaye wonke umntu enale brashi. IMont Saint Michel, indawo ebiyelweyo enecawa ekufuneka ibonwe ukuze icamngce ngobuhle bayo bokwenyani. IArc de Triomphe, i-Basilica ye-Sacred Heart kwaye ke ndinokudwelisa iisayithi ekufuneka uzibonile, ubuncinci, kube kanye ebomini bakho.
Enye yeendawo ezinabakhenkethi abaninzi, kwaye ibekwe emva kweFrance, yiMelika. Ngaphakathi kubo, kukho iindawo ezixineneyo kunabanye. Ewe, umkhenkethi ucacile.
Times SquareIsikwere esidumileyo esikwiNew York sibona ngaphezulu kwe-40 yezigidi zabakhenkethi abadlula minyaka le. Kanye kunye nokubonakala kwayo okupheleleyo kwezibane, kwenza ukuba kuyeke ukunyanzeliswa.
Central Park: Kwintliziyo yeManhattan, sifumana le paki intle, esele siyibonile kwiimovie ezininzi. Malunga nezigidi ezingama-35 zabakhenkethi beza minyaka le ukuza kubona ubuhle bayo kunye nobukhulu bayo.
Las VegasNgubani ongazange aphuphe ngokutshata eLas Vegas? Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yezona ndawo zithandwayo. Ayisiyiyo le njongo kuphela, kodwa iikhasino, imidlalo yomlingo okanye ukukwazi ukutyelela iGrand Canyon.
IBoston: Sisixeko esinelifa elikhulu lenkcubeko. Ukongeza, asiyilibali indawo yokutyela yeCheers kunye nesibonelelo sayo esikhulu sokutya.
ISan Francisco: Esinye sezixeko ezityelelweyo eUnited States. Inofikelelo olukhulu kuyo yonke into esisinika yona, kuba asizukuhamba kude kakhulu ukubona yonke into esiyifunayo.
Los Angeles: Asinakulibala eLos Angeles. Iintaba, iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi kunye nobunewunewu obuphuma ngaphandle kufuneka.
ISpain ikhona indawo yesithathu yabo batyelelwe ngabakhenkethi. Ngaphakathi koku, sineendawo zokufumana zonke izinto esizithandayo. Mhlawumbi, abakhenkethi bakhetha iMosque yaseCórdoba, iAlhambra eGranada naseLa Sagrada Familia e-Barcelona, ​​njengeendawo eziphambili kuzo zonke iingqikelelo. ISeville kunye neReales Alcázares yayo nayo ayikude ngasemva kutyelelo olunamandla. Ngasenyakatho, iCathhedral yaseSantiago de Compostela yindawo yokuhlangana kwabahambi kunye nabathandi bobugcisa. I-Aqueduct yaseSegovia okanye iCathedral yaseBurgos ithathwa njengeendawo zabakhenkethi.